Rudzi: Arts & Entertainment
Iyo shiri cherry muti inenge yakakura muhukuru. Dzimwe nguva inosvika pakukwirira kwemamita gumi nemaviri. Chaizvoizvo, shiri Cherry inokura padyo nemahombekombe emakungwa nenzizi. Inogonawo kuwanikwa mumasango ane hunyoro. Maruva ...
Dhanzi yeMazurka yakaonekwa muPoland. Ikoko kunonzi zvishoma zvakasiyana. Inonzi "Mazur". Kutamba uku kunokurumidza uye kune simba. Nyika yekumusha kwake Mazovia, kunogara vanhu vanozviti Mazura. ...
Aldanov, "Dhiyabhorosi Bridge". Pfupiso uye maficha enoveli
Kubva panguva yeHumambo, Russia yave ichizivikanwa nevanyori vayo uye vadetembi. Mabasa asina kupfuurwa, ayo ave echinyakare kwete chete munyika medu, asi pasirese, anotibvumidza kuti tizvirumbidze nemagariro ...
Dombo remakumi masere rinoratidzwa nenyaya yekuti mhando nyowani dzinowana budiriro huru, uye mafambiro emakore akapfuura anodzikira kumashure. Dombo mabhendi ema80s, akagadzirwa nevatambi vechidiki kwazvo nekuda kwechishuwo chekuzivisa zvakajeka nezve ...
Lyudmila Ivanova mutambi uyo ane biography yakakodzera kuremekedzwa, basa rake rakatanga zvakaoma, asi akakunda zvese uye akazadzisa zvaanga achitsvaka kubva paudiki. Akazvarwa muMoscow ...
Evgeny Kindinov, ane pikicha ikozvino pamberi pako, munguva dzeSoviet akaita kuti vakadzi vazhinji vatambure nerudo rusingadiwe kwaari. Mutambi wacho aive akanaka kwazvo muhudiki hwake, asi aingoda chete ...
Classical art, kusiyana neazvino avant-garde mafambiro, aigara achikunda moyo yevaoni. Chimwe cheakajeka uye chakanyanya kuratidzika chinosara kune chero munhu akasangana nebasa revatambi veDutch maartist. Flemish ...
Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Munyori weRussia wezana ramakore rechiXNUMX. Mumhanzi wake unoratidzwa nemuvara, kudanana uye hupfumi husinganzwisisike. Kutenda kuna PI Tchaikovsky, hunyanzvi hwemimhanzi hweRussia hwasvika pakakwirira zvisati zvamboitika. Panguva imwe chete…
Vatambi vemuvhi "Kurumidza uye Kutsamwa 7", kana Maitiro emuvhi akaitwa pasina Paul Walker
Vatambi vemubhaisikopo "Vanokurumidza uye Vane Hasha 7" uye vashandi vefirimu veiyo purojekiti munaNovember 2013 vakakatyamadzwa kuti muiti webasa guru mumvumo yekuremekedza Paul Walker akafa asina kupedza basa ...
Mirage boka: nhoroondo, discography, pikicha. Kuumbwa kweboka rekare
Muchinyorwa chanhasi, isu tichajairana neyaimbove akakurumbira muboka, rakagadzirwa kumashure mumazuva eSoviet Union uye raizivikanwa kwazvo muhukuru hwenyika yedu yeAmai panguva yePerestroika. Iri ndiro boka reMirage. Biography,…
Yakawanda-chikamu firimu "Mwanakomana waBaba weMarudzi": vatambi uye rangano
Muna 2013, mushure megore nehafu yekuyedza, kutora mifananidzo uye kugadzirisa, rakabatana basa revatenzi vanobva kuRussia, Belarus neUkraine - iyo firimu "Mwanakomana weBaba veMarudzi", yakaburitswa. Iyi nhepfenyuro yave imwe kuyedza kutarisa ...
Moscow inoda kwazvo nhanho iyi. Variety Theatre mumakore ekuvapo kwayo yakapa vagari nevashanyi veguta guru nemisangano yakawanda inonakidza. Mitambo yemitambo uye mabhendi edombo anoita padanho rayo, ...
Biography Lyudmila Zorina anotanga pre-hondo makore. Akazvarwa mwedzi miviri pamberi peGreat Patriotic War, musi waMay 1, 1941, muguta rine zita rakanaka reSaratov. Kubva pahudiki hwake, musikana ...
Ndarama inofungidzirwa seimwe yesimbi yakakosha kwazvo pasi redu. Inoenda neiyo yakasarudzika oxidation uye kupenya kwayo kuri kwekusingaperi. Naizvozvo, humbozha hwakadai hunogona kusvika kune yedu ...
Zita raMarshak Samuil Yakovlevich rinozivikanwa pasi rese. Zvinopfuura chizvarwa chimwe chakakura pane rakanakisa basa remunyori. Chaizvoizvo munhu wese anoziva Marshak semunyori wevana, asi Samuil Yakovlevich anga achiri ...
Pazuva rekutanga re2016 nyowani, mukuru weAvar uye mudetembi weSoviet uye munyori ane zita risinganzwisisike uye risina kujairika revaSlav - Fazu Aliyev - akafa. Iyo Biography yemukadzi uyu akasarudzika inoshumira ...
Kazhinji kangani patinonzwa mazuva ano mazwi echinyorwa uye zvirevo senge "kuberekwa kwengano", tisingafunge kuti ngano chii, muchokwadi. Kana tikatendeukira kune yekutanga zvinyorwa, saka izwi rekuti legenda rinobva mumutauro wechiLatin. Saka ...
Iyo isinganzwisisike nyaya "Mambokadzi weSpades". Zviri mukati menyaya, vanonyanya kutaurwa
Mufaro uye makaro, kuda kunyengedza ramangwana, kukwira kusvika kumatunhu asingasvikike mune imwe swoop - izvi ndizvo zvishuwo zve protagonist wenyaya - mainjiniya Herman. Gare gare Dostoevsky acharatidza ichi chishuwo chinopisa kuita madota emunhu, kunyanya ...
Hama dzaStrugatsky "Kid": pfupiso uye matambudziko ebasa
"Mwana" inyaya yesainzi nyaya naArkady naBoris Strugatsky, rimwe remabasa emifananidzo evanyori veSoviet. Yakabudiswa muna 1971 mumagazini yeAurora. Ipfungwa ipi yakaiswa ...
"Gamba renguva yedu" ndiyo yekutanga ngano yekufungidzira munyika medu, umo Lermontov, nekuongorora zviito nemafungiro e protagonist, anozivisa nyika yake yemukati kuvaverengi vake. Asi kunyangwe izvi, ...
Mibvunzo ye53 mu database yakagadzirwa mu 0,465 masekondi.